မောင်းထောင်မြေဇင်း တရားစခန်းတွင် အမှတ်စဉ် (၈) ယောဂီ တစ်ဦး၏ ကိုယ်တွေ့ မျှဝေမှုများ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
အပတ်စဥ်(၈) ည ၉ နာရီ ရက် ၃၀ စခန်း ယောဂီဟောင်း ပါရှင်။ ဘုရားဖူး သင်ခန်းစာ ကျမရဲ့ အတွေ့ အ​​ကြုံ အခက်ခဲလေးတွေပါ။ မြတ်စွာဘုရား ၄ အသချေ် နဲ့ ကမ္ဘာ တစ်သိန်း ဖြည့်ဆည်း ခဲ့ရတာ။ ဆရာတော် ဘုရားကြီး အားထုတ် ရှာ​ဖွေခဲ့ ရတာ။ ကျမတို့ အတွက် ခူးခပ်ပီး သားအဆင် သင့်။ ဒါတောင် ကျမ ဒီနေရာ မှာ ရင်ဆိုင် ရတော့တာ ပါဘဲ။ အခက် အခဲ စတွေ့တာ ကတော့ အိမ်က ဘုရား ဖူးရတဲ့ သင်ခန်း စာပါ ဘဲ။
အခန်းက ဘုရား က ၂၀၀၄ တည်းက ပုဂံကနေ ပင့်ဆောင် ပူဇော်လာ ခဲ့တာ။ ပြောင်းရွှေ့ ရတဲ့ ဒေသ တိုင်း
ပစ္စည်း အကုန် မသယ် နိုင် ရင်တောင် ဦးစားပေး (၁) အနေ နဲ့ ပင့်ဆောင် နေကျ ရုပ်ပွား ဆင်းတု တော်ပါ။
အခန်း တံခါးဖွင့် တာနဲ့ မြင်ရ၊ မနက် ည ဘုရား ရှိခိုး တိုင်း စူးစူး စိုက်စိုက် ကြည့်ပီး ပူဇော် နေကြ ပါ။
ခု ကိုယ့်အ ခန်းထဲက ဘုရား ဖူးပါ ဆိုတော့ လွယ်လွယ် လေးပေါ့။ စိတ်ကူး ယဥ်ရ တာ အလွယ်ဆုံး မ လား ရှင်။ ဘယ်လောက် ထိုင်ထိုင် ဘယ်လို အာရုံ ပြုပြု လုံးဝ ဖူးလို့ မရပါ ဘူး။ မျက်နှာ တော် လုံးဝပေါ် မလာ ပါဘူး။ နောက်နေ့ ဆက်လုပ် တယ် မရဘူး။ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား မဟာမုနိ ဘုရားကြီး ဖူးတယ်။
ခဏ ခဏ ရောက်ဖြစ် ဖူးဖြစ်တဲ့ နေရာ ဒေသတွေ ပါ။ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြတ်​​​ပြတ် သားသား မရပါ ဘူး။
သဘော ပေါက်စ ပြုလာ ပါပီ။ ဒါဟာ စိတ်ကူးယဥ်နေ တာမဟုတ် ဘူး ဆိုတာ ကိုပေါ့။ ကျမက ကျမ ရဲ့ senior အမကြီး နဲ့ အတူ တရားနာ တရား ထိုင်တာပါ။ အမကြီး ကတော့ စာရင်း သွင်းမထား ပါဘူး။
ဘုရားဖူး သင်ခန်းစာ ကို အစပိုင်း မှာ ကျမတို့ အားမရ ကျေနပ် မှုမရ ပါဘူး။
ဒီတော့ ကျမ တို့ ဘာလို ​​နေလဲ သုံးသပ် ရပါပီ။ ဒီတော့ ကျမတို့ အားပို ထည့်မှ ရမယ်၊ ဝီရိယ စိုက်မှ ရမယ် ဆိုတာ သိလာ ပါတယ်။ ကျမက​​ တော့ ​ညနေ ၃ နာရီ ကစပီး ဆက်တိုက် ထိုင် ပါတယ်။ ည ၇ နာရီ တရား မလျောက် ခင်အထိ ပေါ့။ တနေ့ ၃ နာရီ လောက် အချိန် ယူပါတယ်။ စိတ်ငြိမ် ရာအရပ် ဖြစ်တဲ့ အနီးနားက ဘုရား ကုန်းပေါ်က ဓမ္မာ ရုံမှာ သွားထိုင် ပါတယ်။ October 12 ရက်နေ့ မှာMae Zar Wint acc တင် ထားတဲ့ Ma Wai Mon နဲ့ Interview လေးကိုထပ်ခါ ထပ်ခါ နာ။ညက ဘုန်းဘုန်း ဦးပညာဒီပ ဟောတဲ့ တရားကို ပြန်နာ။ တစ်ခြား အတန်း ဒီလိုနေ့ မှာဆရာတော်ဦးကေလာသ ဟောတဲ့ တရားကို ထပ် နာ။ ဒီနေ ရာမှာ ပြောချင် တာက ကျမ တို့တေ ဘုရားဖူး လို့ မရဘူး မရ ဘူးဆိုပီး စိတ်ဓာတ်ကျ အာငယ် နေလို့ မရပါဘူး။
ကိုယ် ဘာလိုနေလဲ သုံးသပ် နိုင်ဖို့လို ပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျမတို့ သဒ္ဓါ တရား ရှိလို့ ဒီ online စခန်းကို လာဝ င်ကြတာ မဟုတ် ပါလား။ နည်း စနစ်ကို ယုံမှား သံသယ ဖြစ်ဖို့ မလို ဘူးလေ။ သမာဓိ အားနည်း နေတာလား။ ဝီရိယ အားနည်း နေတာလား။ စိတ်ညွတ်တာကို မလုပ်တတ် တာလား။ နားမ လည်တာလား။ လောဘကြီးလွန်းနေ တာလား။ မရလို့ ဇွတ် အတင်းလုပ် ကိုယ့်ကိုယ် ကို စိတ်ဆိုး ဒေါသ ထွက်နေ တာလား။ ရအောင်လုပ်ဖို့ ကိုယ် ဘာလို နေသလဲဆို တာပါဘဲ။ ပဲခူး ရွှေမော်ဓော ဘုရားဖူးတော့
မြေခခဲ့တဲ့ ထီးတော် ကြီးပေါ်က သက္ကရာဇ်ကို ကျမ ဖတ်တယ်။ ပဲခူးမှာ နေဖူးတဲ့ မောင်လေးကို မေးတယ်
သူ မမှတ်မိ ဘူးတဲ့။ ကိန်း ဂဏန်းတေ ဟုတ်မဟုတ် Google ခေါက်ပီး confirm လုပ်မိ ပြန်တော့
ကိုယ် သမာဓိကို အသိ အမှတ် ပြုရပြန် ပါရောလား။
သွားမဖူး ဖြစ်တာ ကြာပီ ​ဖြစ် တဲ့ ကမ္ဘာအေး ဘုရားဖူး တော့ ရုပ်ပွား တော်ကို ဖူးလို့ မရ ပါဘူး။ ဒါပေ မဲ့… နောက်ခံ Background မှာ ဆေးရေး ဗောဓိညောင်ရွက် တွေဘဲ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဟုတ်လား မဟုတ်လား မသိဘူး၊ ရှိလာ မရှိလား မသိတော့ Googleခေါက်ကြည့် လိုက်တော့ အံ့သြ ထူးဆန်း ​​ဖြစ်မိရ ပြန်ပါတယ်။
တစ်နေ့ တစ်နေ့ သင်ခန်း စာကို Google မှာ ရှာကြည့်ပီး မျက်စိ ထဲမှာမြင် အောင်ကြည့်ပီး Flash back လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ထိုင်တယ် စိတ်ညွတ် တယ် မရဘူး။ ကျမတို့ စိတ်ကူးယဥ် နေတာလား ကိုယ့်ကိုယ် ကို စမ်းသပ် တယ် သုံးသပ် တယ်။ သေချာ ပါတယ် သမာဓိ ထူထောင် ပီး စိတ်ကို ထိန်းကျောင်း ခိုင်းစေရ တာဟာ စိတ်ကူး ယဥ်​ နေတဲ့ စိတ်ကူး ယဥ်လို့ရ တဲ့ဟာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပါဘဲ။ ဗြဟ္မာ့ ပြည် သိကြား ပြည် ငရဲပြည် နဂါးပြည် ဘုရားဖူး သင်ခန်း စာတေ ပါပါ တယ်။
အတိတ် ဘဝ ပြန်ကြည့် တာတွေ ပါပါ တယ်။ အဲ့ဒီ အခါ တေမှာ ကျမတို့ ပင်ကိုယ် စရိုက် ရဲ့ လောဘ တွေ အတ္တတွေ မာန​တွေ ပေါ်လာလေ့ ရှိတာ သိသိ သာသာ ပါဘဲ။ သကြား ရေစင်လေး သောက်ချင်လို့ တောင်း သောက် ရတာနဲ့၊ မြကျောက် ဖျာမှာ ထိုင်ချင် ရတာနဲ့၊ (ထိုင်လို့ မရဘူး တဲ့ရှင့် သိဘူး လေနော်😁) ဒီလို ​လောဘ ဒေါသ အတ္တ မာန နဲ့ တပ်မက်မှု တေနဲ့ ဆိုတော့ ဒီ ဘုရားဖူး သင်ခန်းစာ မှာ ဖူးလို့ရ တာရှိ သလို မရ တာလည်း ရှိ မြင်တာ မြင် မမြင်တာ မမြင်။ ရောက်တဲ့ နေရာ ရောက်။ မရောက် တဲ့နေရာ မရောက် ဘူး ပေါ့။ တခါ တလေ စိတ်ဓာတ် ကျ တစ်ခါ တစ်လေ အားမရ ဖြစ်ရ တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျမ သွား ချင်တာ နိဗ္ဗာန် ဒါတေ မဟုတ်ဘူး ရ မရ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဆိုပီး အားတင်း ဝီရိယ ပြန်တင် ခဲ့ရတာ ပါ။
စာတတ်ဖို့ အဓိက ဆိုပေမဲ့ စာမေးပွဲ အောင်ဖို့လည်း လိုသေး တယ်​လေ။ ဒါမှ ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားတက်ပီး
ကျေနပ်မှု ရမယ်မို့ လားရှင်။ နောက် တစ်ခုက ကျမ တာဝတီံသာ ဘုရား ဖူးတဲ့ နေ့မှာ ဘုရားရင် ပြင်တော် ပေါ်မှာ ထိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့မြောက် ယွန်းယွန်း ကို မျက်နှာ မူရမယ် ဆိုတော့ စနေထောင့် မှာ ထိုင် ဖြစ် တယ် ပေါ့။ ကျမ ဝါယူဝါ မှတ် ယူနေစဥ် မှာဘဲ ကိုယ့်ဘေးနား တစ်ထိုင် ကျော်လောက် က အသက် ရှူသံ ခပ် ပြင်းပြင်း ကြားရ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်က ညနေ ၆ နာရီ ဝန်းကျင် ဘုရား မီးလာဖွင့် တဲ့အချိန် ဆိုတော့
မီးသမား ကိုယ့်ကိုများ လာနောက် နေတာလား လို့ ဒီလူတေက ကျမနဲ့ ရင်းနှီး တယ်လေ။ အသံကို နားစွင့် မိတယ်။ ပိုပြီး ကျယ်လာ ပီပြင် လာတယ်။ ကျမ စိတ်ကလေး ငြိမ် ဝပ် လာတယ်။ ကျမ အသက် မရှူ ဘဲ နားစွင့် တယ်။ တကယ်ကြီး ကိုယ့်ဘေး နားမှာ ရှူနေ တာ။ လူ အသက်ရှူသံ မဟုတ် တာတော့ သေချာ နေတယ်။ ခပ်ပြင်းပြင်း နှာမှုတ် သံလို ရှူး ရှဲ ရှူးရှဲ ဆိုတဲ့ စည်းချက် ညီညီနဲ့ အသံပါ။ ကျမ မေတ္တာပို့တယ် အမျှဝေတယ်။ မရပါဘူး ။ မနှောက်ယှက်ဖို့ပေါ့။
ကျမ ကြောက်စိတ် ဆိုတာထက် အပြင်မှာ တခုခု တကယ်များ ရှိနေမ လားဆိုပီး တရားဖြုတ် ပီး ဘေးဘီ ဘယ်ညာ ရှာကြည့် ပါတယ်။ ဘာမှ မတွေ့ ဘာသံ မှမကြား ရတော့ ပါဘူး။ အကျယ်ကြီး အမျှ ဝေပီး ပြန် လာခဲ့ ရတာ ပေါ့။ Senior volunteer တွေ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း တရား ထိုင်စဥ်မှာ ခန္ဓာ အပ်ပီး သားမို့ ကြောက်စရာ မလိုဘူး လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပြန် ပေးရတာ ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စည်းချ ဂါထာ ကိုတော့
ညတိုင်း ရွတ်ဖြစ် သွားပါ တယ်ရှင်။ နောက်ပီး ရိုးရိုး သားသား ဝန်ခံ ပါတယ်။ ကျမ ငရဲပြည် ကို မသွား ခဲ့ပါ ဘူး။ ကျမတို့က သာယာ ကြည်နူး ဖွယ် pleasure တွေ ကောင်းတာ တွေဘဲ ရချင် ကြတာ မို့လား။
အာ့လို အနိဌာရုံ တေကို ကျမ မကြည့်ရဲ လို့ပါ။ မကြည့် ချင်လို့ ပါ။ ဒီမှာ တစ်ချက်က စိတ် နဲ့တောင် မသွား ချင်ရင် ကျမ အများကြီး ကြိုးစား ရမှာ ပေါ့။ ဒါက ကျမရ ခဲ့တဲ့ သတိ သံဝေဂ တစ် ခုပေါ့။ မောင်းထောင် မြေဇင်း သာသနာ လွှမ်းပတ် ကမ္ဘာတည် ပါစေသော် တည်စေသော်။ ဆက်ပါဦးမည်>>>>>
သတိတရနဲ့ Invite လုပ်ပေးတဲ့ မမကျော့ Kyawt Kyawt Lwinကို ဂါရဝ ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ဤ post ကို ရေးသား အပ်ပါ တယ် ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ တို့ဖြင့် ကျေးဇူးပြု သူများ အားလုံး ကိုလည်း ကျေး ဇူးတင် ဂါရဝ ပြုအပ် ပါတယ် ရှင်။ အပတ်စဥ်(၈) ည ၉ နာရီ ရက် ၃၀ စခန်းမှID 1234 ယောဂီဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကျမရဲ့ ပင်ကိုယ် စရိုက်က ဟိုဟာ လုပ်ချင် ဒီဟာ လုပ်ချင် ဟိုဟာ ဖြစ်ချင် ဒီဟာ ဖြစ် ချင် လောဘ အရမ်းများ ပါတယ် တခုခုဆို စိတ်လိုက် မာန်ပါ ပြောဆို ပစ်တတ် တဲ့ ဒေါသအိုး လို့ လည်း ပြောလို့ ရပါတယ် အတွေးတွေ လည်း အရမ်းများ တဲ့ မောဟ များတဲ့ သူတ ယောက်လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ကိုယ့်ရဲ့ personality ကို မကြိုက် လို့ ရိပ်သာ မကြာ မကြာ ဝင်​​ဖြစ် ပါတယ် ရိပ်သာ ၄ ခု ဝင်ဖူးပါတယ်
ဒီစခန်း မဝင်ခင် အထိလည်း တရားအား ထုတ်လျက် ပါ။ ဒါပေမဲ့ တရားတစ် ကြိမ်ထိုင်ဖို့ တော်တော်​ လေး အရှိန် ယူနေရ တဲ့အ​​နေ အထားပါ။ တကယ်တော့ ကိုဗစ် မရှိရင် စခန်းသွား ဝင်ဖို့ plan ရှိပါတယ်။
ခုလို အနေအထားမှာ ဒီgroup ကို မမကျော့က Invite လုပ်တော့ တခါတည်း Accept လုပ်၊ ပါပါ မပါ ပါ ဆိုပီး ဘာမှ မလေ့လာ ဘဲ Form တင်ခဲ့ ပါတယ်။ စာရင်း ပါလာတော့ Zoom လည်းမ သုံးတတ်
Internet Line ကလည်း မမိ တမိ စခန်းရဲ့ နည်းစနစ် သဘာဝ ကိုလည်း မသိ ညဘက် duty က လည်းရှိ နိုင်သေး နဲ့ မလုပ် နိုင်မှာကို စိတ်ပူ မိပါတယ်။ သူငယ်ချင်း တေက အ​ကြံပြု ပြောဆို ပါတယ်၊
နင်လျောက် လိုက်လုပ်နေ တာ စုံနေပီ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဖြစ်နေမယ်တဲ့။
ဒီနေ ရာမှာ တခါတည်း ဖြေ​ပေး ချင်ပါ တယ်။ ကိုယ်မှာ မသိ​​သေး တဲ့ မရှိသေး တဲ့ တစ်နေ ရာမှာ မရခဲ့ တဲ့ နည်း စနစ်တွေ ရှုမှတ် နည်းတေ ပညာတေ အများကြီး ရပါတယ် တကယ်ကို စနစ်တကျ နဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း မဟုတ်ဘဲ ခရီး ရောက်နိုင် တဲ့ နည်း စနစ်ဖြစ် တာကြောင့် အသက်အရွယ် မရွေး အားထုတ် နိုင်တဲ့ နည်း စ နစ်ဖြစ် ပါတယ်။ မပင် မပန်းလို့ ပြောလို့ လွယ်လွယ်​ လေးလားလို့ တော့ မမေး စေချင် ပါဘူး။ ဘယ်အရာ မ ဆို အားထည့်မှ အောင်မြင် တာမို့လား။ ကြိုးစား အားထည့် ဖို့တော့ လိုတာ ပေါ့ရှင်။
1. ကျွန်မက နေပူ ထဲမှာ၂ နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ် ခဲ့ရသူမို့ အသား အရေ မွဲခြောက် ခြောက် ဖြစ်နေ တာပါ အ ရိပ် ထဲ ပြန်ဝင် ရတာ ၂ လ ဘဲရှိ ပါသေး တယ် Essence တခုသုံး နေတာ လွဲပီး ထူးထွေပီး.. skin care မလုပ်​ ဖြစ်သေး ပါဘူး။ ဒီကာလမှာ တခြားသူ တေက ပြောလာပါတယ် အသား အရေတွေ ကြည်လာ တယ် တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ် ကို လည်း သိသာ ပါတယ်။ ဒါဟာ…”စိတ်ကြည် မှ ရုပ်ကြည် တယ်” ဆိုတာ သိသိ သာသာ လက်တွေ့ ရ လိုက်တဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး တစ်ခု ဆိုတာ ပထမ ဦးစွာ ပြောပြလို ပါ တယ်။
2. ကျမ ဒီ စခန်း ရဲ့ ကျင့်စဥ် ထဲက ကိုယ် စောင့် ကမ္မဌာန်း ၄ ခု စလုံး ကို အလွန် ကို အားရ ကျေနပ် မိပါ တယ်။ ဗုဒ္ဓါ နုဿတိ ကျမ တို့ နေ့စဥ် ပွားနေ ကြပါ တယ်။ ပုတီး စိပ်တယ် ဂုဏ်တော် ကိုးပါး ရွတ် တယ်။
ကျမက လုပ်ငန်းခွင် မပျက် စားရင်း သွားရင်း လုပ်ရင်း ကိုင်ရင်း Talley ​လေး တစ်ချောက်…ချောက် ပါး စပ်က တ တွတ်တွတ် ရွတ်ဖြစ် နေတတ် ပါတယ်။ ဂုဏ်တော်ကို ပုံတော် မြင်အောင် နှလုံးသွင်း ဖို့ မလွယ် ပါ ဘူး။ ကျမ ကတော့ တကယ် လည်း မလုပ်နိုင် ခဲ့ မလုပ် တတ်ခဲ့ ပါဘူး။ ဒီမှာ စနစ်တကျ သင်ပေး​တော့ ဗုဒ္ဓါ နုဿတိ ကမ္မဌာန်း ကို ပွားတတ် သွားပါ တယ်။ အားသာ တာက တစ်ရက် လုံး အချိန်ပေး ပွား ရတော့ သေ သေ ချာချာ လုပ်ဖြစ် လုပ်နိုင် လုပ်တတ် သွားပါ တယ်။ ဒါက ကျေနပ် မိတဲ့ တစ်ခု ပါ။
3. မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ကတော့ အကြိုက်ဆုံး ပါဘဲရှင်။ ဘုရားရှိခိုး အသံထွက် မေတ္တာပို့ နေ့စဥ် ပြုနေ ပေမဲ့
ပို့လွှတ် တဲ့ သူဆီ ရောက်မ ရောက် မသိ နိုင်ပါ ဘူး။ ဒီမှာ တော့ မေတ္တာ ပွားပုံ နည်း မျိုးစုံကို အာရုံ ကိုညွတ် ရုပ်ကို ထင်အောင် မြင်အောင် စိတ်ကို ညွတ် ကျကျ နန ပွားတတ် သွားပါ တယ်။ “နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိ​မ်း​ချမ်း ကြပါစေ “လို့ ကိုယ့်စိတ် ကလေး က တစ်စုံ တစ်ယောက်ဆီ ညွတ်လိုက် တိုင်း ကိုယ့်စိတ် ကလေး ငြိမ်းချမ်း သွားတဲ့ အရသာ သိပ် ​ကြည်နူး ပီတိ ဖြစ်ရ ပါတယ်။ ရှေ့မ ဆက်ဘဲ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ဘဲ စီးဖြန်း နေချင်ခဲ့ မိတဲ့ အထိ ပါဘဲ။ ဒါကြောင့် လည်း ဒေါသ အားကြီးသူက မေတ္တာ များများပွား ရမယ် လို့ဆိုထား တာကိုး။
ဝိပဿနာ စစ်စစ် ကုသိုလ်ပီးရင် မေတ္တာ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ဟာ အမြတ်ဆုံး မို့ကျမ အကျေနပ်ဆုံး ရလာဘ် တခုပါရှင်။
4. မရဏ နုဿတိ နှင့် အသုဘ ကမ္မဌာန်း ကတော့ ကျမကို ကြောက် ရွံ့ ထိတ် လန့် သံဝေဂ ရစေ တော့တာ ပါဘဲ။ ကျမ မမြင်လဲ မမြင် ချင်ဘူး ရှုလဲ မရှုချင် ခဲ့ပါ ဘူး။ ကိုယ့် အလောင်း ကို ကိုယ် ဘာသာ အခေါင်း ထဲ ထည့် ကမ္ဗည်း ထိုးရတာ လွယ်တော့ မလွယ် ဘူးရှင်။ ကျမ ​​သေရဲဖို့ အများကြီး ကြိုးစား ရဦးမည် ဆိုတဲ့ အ သိ တစ်ခု ပေါ့။ “မြေဇင်းက အပြန် သေမင်းကို အန်တု နိုင်ရ မယ်” ဆိုသ ကဲ့သို့ ကျမ ဆက်လက် ကြိုးစား အားထုတ်ပါဦးမည်။ မောင်းထောင်​​​မြေဇင်း သာသနာ လွှမ်းပတ် ကမ္ဘာတည် ပါစေသော် တည်စေသော်။
(ID 1234) Zinnia Lwin( Facebook Account မှကူးယူ ဖော်ပြ ပါသည်။)